GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Zande Zulu
Enyi na enyi na-ekwurịta okwu ugboro ugboro. Ha nwere ike ikwurịta okwu ihu na ihu ma ọ bụ ha ejiri fon, akwụkwọ ozi ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ na-agwa ibe ha okwu. Ọ bụrụkwa na anyị chọrọ ka anyị na Chineke dịrị ná mma, anyị na ya ga na-ekwurịta okwu mgbe niile. Ma, olee otú anyị na Chineke ga-esi na-ekwurịta okwu?
Otú anyị si agwa Jehova Chineke okwu bụ ikpegara ya ekpere. Ma, ekpere dị iche n’okwu nkịtị mmadụ na ibe ya na-ekwurịta. Anyị kwesịrị ịghọta na onye anyị na-agwa okwu mgbe anyị na-ekpe ekpere bụ Onye kere anyị, Onye Kasi Elu n’eluigwe na n’ụwa. Ịghọta ụdị onye ọ bụ ga-eme ka anyị na-akwanyere ya ezigbo ùgwù mgbe anyị na-ekpegara ya ekpere. E nwekwara ihe ụfọdụ anyị kwesịrị ịna-eme ma anyị chọọ ka Chineke na-anụ ekpere anyị. Ka anyị leba atọ n’ime ha anya.
Nke mbụ bụ na ọ bụ naanị Jehova Chineke ka anyị ga na-ekpegara ekpere, ọ bụghị Jizọs, ndị sent ma ọ bụkwanụ ihe a kpụrụ akpụ. (Ọpụpụ 20:4, 5) Baịbụl kwuru hoo haa, sị: “N’ihe niile, jirinụ ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.” (Ndị Filipaị 4:6) Nke abụọ bụ na anyị ga na-ekpe ekpere n’aha Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs Kraịst. Jizọs kwuru, sị: “Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.” (Jọn 14:6) Nke atọ bụ na ihe anyị na-ekpe n’ekpere kwesịrị ịbụ ihe bụ́ uche Chineke. Baịbụl kwuru, sị: “Ihe ọ bụla nke anyị rịọrọ ya dị ka uche ya si dị, ọ na-anụ olu anyị.” *—1 Jọn 5:14.
Enyi na enyi na-agwa ibe ha otú obi dị ha ugboro ugboro
Mmadụ abụọ agaghị anọgide na-abụ enyi ma ọ bụrụ otu onye n’ime ha na-agwa ibe ya okwu, onye nke ọzọ anaghị atụpụ ọnụ. Ebe ọ bụ na enyi na enyi na-agwa ibe ha otú obi dị ha, anyị kwesịkwara ikwe ka Chineke na-agwa anyị okwu. Ya gwawa anyị okwu, anyị egee ya ntị. Ị̀ ma otú Chineke si agwa anyị okwu?
Jehova Chineke na-esi n’Okwu ya e dere ede, bụ́ Baịbụl, agwa anyị okwu n’oge a. (2 Timoti 3:16, 17) Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? Ka e were ya na ezigbo enyi gị detaara gị akwụkwọ ozi. Mgbe ị gụchara ya, gị ejiri obi ụtọ na-agwa ndị mmadụ na o nwere ihe enyi gị gwara gị. Ma, enyi gị agwaghị gị ihe ahụ n’ọnụ, kama o dere ya ede. Otú ahụ ka ọ dịkwa mgbe ị na-agụ Baịbụl. Jehova na-agwa gị okwu mgbe ị na-agụ ya. Gina, bụ́ onye anyị dere ihe o kwuru n’isiokwu mbụ gbara n’Ụlọ Nche a, sịrị: “Echere m na ọ bụrụ na m chọrọ ka Chineke bụrụ enyi m, m kwesịrị ileba anya n’akwụkwọ ozi o deteere anyị, ya bụ, Baịbụl.” O kwukwara, sị: “Ịgụ Baịbụl kwa ụbọchị emeela ka mụ na Chineke dịkwuo ná mma.” Ị̀ na-agụ Baịbụl ụbọchị niile ka Jehova nwee ike ịna-agwa gị okwu kwa ụbọchị? Ime otú ahụ ga-eme ka gị na Chineke dịkwuo ná mma.
^ para. 5 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu otú ikpe ekpere ga-esi eme ka gị na Chineke dịrị ná mma, gụọ isi nke 17 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.